Cunnooyinkaan waa rikoodhada ka soo baxa cajiibka Cuntada Cuntada ee Arcadia Market Mobile hooyadiis hore ee WIC, JuJu Harris. Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelino Xarunta Arcadia ee Cuntada Dheeriga ah iyo JuJu Harris si aan u siino ogolaansho aan kula wadaagno cuntooyinkaan.
Arcadia waa urur aan macaash doon ahayn oo u heellan abuuritaanka nidaam cunno maxalli ah oo dheellitiran oo waara laga helo aagga Washington, DC. Iyada oo ku saleysan sababaha taariikhiga ah ee Woodlawn Estate ee Alexandria, Virginia, mahadnaqa iskaashi taariikhi ah oo lala yeeshay National Trust for Ilaalinta Taariikhda, Arcadia waxay maamushaa afar barnaamijyo kala duwan oo wax ka qabta baahi gaar ah oo bulshada dhexdeeda ah, iyadoo si wada jir ah loola macaamilayo macaamiisha, beeraleyda, iskuulada, iyo hay'adaha.
Waxaan rajaynayaa in cuntooyinkan ay kuu soo saari doonaan suuqa beeralayda isla markaana ay jikadaada soo gali doonaan sannadka oo dhan. ”
JuJu Harris, Baraha Cunnada ee Xarunta Arcadia ee Cuntada & Beeraha Joogtada ah
2.92 ka 60 votes
3.84 ka 24 votes
3.65 ka 14 votes
1 / 4 cup iyo Saytuun,
4.08 ka 13 votes
1 pound Chard Swiss
U kalluumeysiga cunno dhakhso leh, oo nafaqo leh qoyskaaga? Ururka Wadnaha Mareykanka wuxuu kugula talinayaa cunista kalluunka ugu yaraan laba jeer usbuucii maxaa yeelay waa il wanaagsan oo laga helo borotiinka oo ay ku yar tahay dufanka buuxa.
Beedka ukunta waxaa ka buuxa fiitamiino, kalooriyadiisu hooseyso iyo ilo tamar leh. Mar alla markii aad ogaato sida ay ukunta ugu faa'iido badan tahay caafimaadka qoyskaaga, waxaad u baahan doontaa inaad iyaga ka dhigto ku darista joogtada ah ee cuntadaada.
Marka loo eego “Adduunyada ugu Caafimaadka Badan”, chard-ka Switzerland waa mid ka mid ah khudaarta ugu nafaqada badan oo ku soo xigta oo kaliya kaalinta labaad ee isbinaajka marka loo eego wadarta nafaqada.
Shimbirkan uumiga ah waa sahlan tahay in la kariyo waxaana ka buuxa borotiin si looga caawiyo quudinta muruqyada koraya carruurtaada.
Oatmeal wuxuu hodan ku yahay fiber, kaas oo ka faa'iideysanaya caafimaadka cunugga isagoo yareynaya halista calool istaagga iyo halista noloshooda oo dhan ee cudurka wadnaha.